Momba anay | Ekipan'i CHUNKAI
Momba an'i Chunkai
Shanghai Shenhe Packing Technology Co., Ltd .--- mitaky ny vokatra plastika
Teknolojia fanontana Feng Qi Feng (Shanghai) Pty, Ltd .--- miompana amin'ny vokatra taratasy
Shanghai Chunkai Trading Co., Ltd .--- Manan-danja amin'ny orinasa import sy export
Ny ekipan'i CHUNKAI'S dia natokana hananganana orinasan-fonosana ambony indrindra eran-tany.
Nandritra ny 25 taona mahery, mba hihaonana amin'ny filan'ny mpanjifa dia nanitatra ny làlan'ny vokatra izahay, izay misy ny orinasan-taratasy sy fonosana plastika eto amintsika ary koa ny rafitry ny mpamatsy hafa.
Manana fifehezana kalitao henjana izahay amin'ny alàlan'ny mpiasa 10 QC (ao anatin'izany ny 3IQC, 2 IPQC, 5 OQC) ary ny mpiasa 4 QA avy amin'ny akora tonga hatramin'ny vokatra vita. Miasa amin'ny ISO9001 ， ISO140000 ， QS System fenitra izahay.
Ny ekipanay dia manome fikarohana momba ny vokatra, famolavolana, fanodinana ary fanarahana serivisy aorian'ny fivarotana. Mandefa ara-potoana ny vokatra izahay, satria manana mihoatra ny 1000 ny mpamatsy azo itokisana.
Traikefa amin'ny orinasa
Ny distrikan'ny orinasa CHUNKAI 'S vaovao dia vita tamin'ny 2015, manana lay trinite, ao anatin'izany ny atrikasa plaskitapo tic, tavoahangy plastika, vokatra plastika, boaty taratasy, trano-fivarotana sy departemanta fivarotana, fikarohana, doka,mitazona 20000 metatra toradroa, izay pro tafiditrafaritra fanodinana duction amin'ny alàlan'ny plastika, fonosana sy trano-orinasa indostrialy any Shanghai.
Ekipan'i CHUNKAI manana mpiasan'ny serivisy tanora mihoatra ny 100 miasa amin'ny tontolon'ny birao 3000 metatra toradroa ary koa ny asa an-toerana mihoatra ny 300 miasa amin'ny atrikasa mihoatra ny 20000 metatra toradroa. Ny fivoaran'ny sy ny traikefan'ny ekipa dia ny faran'ny lalana mankany amin'ny fahombiazana sy nofinofy. traikefa an-trano 4 na 5 fampirantiana avy any ivelany na avy any ivelany isan-taona, nefa koa mandray anjara amina hetsika fananganana ekipa maro, mifanila eo amin'ny samy hafa. mitsangana ary mandehandeha hatrany.
Noho izany, tsy mitsahatra mampiditra ra vaovao amin'ny ekipanay izahay ary mikatsaka ny tanjona farany ---Mamolavola asa ary tsy manenina!